MOMBA ANY Etazonia - Xuzhou Sogood International Trading Co. Ltd.
Tongasoa eto Sogood
Amin'ny maha-orinasa feno anay dia manome amina boaty fitaratra be dia be isika, toy ny fikarakarana manokana, ny fanatsarana tarehy, ny ranomanitra, ny salon sy ny spa, ny sakafo sy ny zava-pisotro, ny fonosana vokatra vita amin'ny simika sy ny tokantrano, na ny orinasam-pirenena maro sy eo an-toerana, ho an'ny orinasa mitovy fampiasana karazany maro.
Tao anatin'ny 10 taona lasa, dia nitombo ho lasa mpamokatra matihanina sy mpitarika ny indostria izy io.
Ny tranobainay dia manana andalana famokarana otomika 36, ​​andalana famokarana manual, manamboatra mihoatra ny 2.8 tapitrisa isan-karazany ny vokatra fitaratra isan'andro. Manana mpiasa maherin'ny 500 isika, ao anatin'izany ny mpiasa tranainy 28, ny mpiasan'ny inspeksyon kalitao miisa 15. Ny kalitao vokatra dia hentitra ary voafehy ny sosona.
Araka ny ny ray aman-dreny orinasa , naorina ny orinasa izahay 2009 , izay natokana ao amin'ny tsena anatiny sy any ivelany ary nanjary orinasa lehibe mpamokatra lehibe indrindra ao amin'ny faritanin'i Jiangsu.
Raha jerena ny fitadiavana fividianana tsena any ivelany dia nametraka departemantan'ny fanafarana sy ny fanondranana izahay 2019 , Xuzhou Sogood International Trading Co Ltd , izay mirotsaka amin'ny fampandrosoana ny vokatra, fanavaozana maharitra ary fandrindrana ny olana momba ny fanondranana.
Miaraka amin'ny traikefa an-taonany mihoatra ny 10 taona amin'ny varotra sy ny fifehezana kalitao, manana trano fitobiana 2 000 metatra toradroa ao Xuzhou, izay mitazona vokatra azo an-tapitrisany, tanteraka amin'ny fangatahan'ny mpivarotra.